भीख मागिरहेकी वृद्ध महिला देखेपछि दिन थाले भीख, कसैलाई थाहा थिएन वास्तविकता - Taja Khabar
भीख मागिरहेकी वृद्ध महिला देखेपछि दिन थाले भीख, कसैलाई थाहा थिएन वास्तविकता
एजेन्सी। चीनको एक रेलवे स्टेशनमा भीख मागिरहेकी महिला यो हप्ता त्यहाँको समाचारमा छाइन् । महिला स्टेशनमा मानिसहरुसँग भीख मागिरहेकी थिइन् त्यही बेला लाउडस्पिकरमा अनाउन्स भयो कि कसैले पनि ती महिलालाई भीख नदिनू । त्यसपछि ती महिलाका छोरा सार्वजनिक रुपमा अगाडि आए र उनले महिलाको वास्तविकता बताए । महिला निकै धनी परिवारकी थिइन् र ५ तले विलासी बंगलामा छोराको परिवारसँग बस्थिन् । छोराले बताए कि परिवारले जति रोके पनि उनी भीख माग्न निस्किन्छिन् ।
७९ वर्षकी ती महिला पूरै हप्ता चीनका सबैजसो मिडियामा छाइन् । उनका छोराका अनुसार उनीहरुको शहरमा धेरै जमिन र भवनहरु छ जो भाडामा दिइएको छ । उनीहरुको एक उद्योग पनि छ । छोराका अनुसार उनले आमालाई कैयौं पटक भीख माग्न रोकिसकेका छन् तर कहिल्यै पनि आमाले उनको कुरा मानिनन् । जबकि महिलाको बैंकमा आफ्नै राम्रो बचत पनि छ । छोराले उनलाई यसअघि पनि भीख माग्बाट रोक्न अनेक तरिका अपनाएका थिए तर सफल हुन सकेनन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार ती महिलाले पहिले रेलवे स्टेशनमा नक्शा बेच्ने काम गरेकी थिइन् । तर, रेलवे व्यवस्थापनले यसो गर्न दिएन त्यसपछि महिलाले भीख माग्न थालेकी थिइन् । उनी बिहान १० बजे रेलवे स्टेशन आउँछिन् र साँझ ८ बजेसम बस्थिन् । यसरी उनले दिनमा ३ हजारसम्म कमाउँछिन् । महिलाले पूरै दिन घरमा बस्न नचाहेकोले बाहिर निस्किएको बताएकी छिन् । उनले यसरी जम्मा गरेको पैसाले आफ्नो लागि एक केयरटेकर राख्ने बताइन् । मिडियामा चर्चामा आएपछि अहिले ती महिलाको पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्नेहरुको सामाजिक संजालमा बहस चलिरहेको छ ।
भोलि बिहानै पिपलको फेदमा खाल्डो खनेर राख्नुहोस् यी चिज ! धनले भरिनेछ घर !
बुद्ध एयरको उडान डिले भन्दै अन्तिममा क्यान्सिल भएपछी एयरपोर्टमै घम्साघम्सी (भिडियो सहित)
अस्ट्रेलिया जान लत्ताकपडा किनमेल गरि नारायणगढ बजारबाट फर्केका सुदिप एकाएक बेपत्ता,…
धेरै बाँचेँ भनेर वृद्धले हाने आफ्नै पेटमा चक्कू
अस्ट्रेलिया जान लत्ताकपडा किनमेल गरि नारायणगढ बजारबाट फर्केका सुदिप एकाएक बेपत्ता, परिवारले रुवाबासी गर्दै खोजिदिन आग्रह गरे
४ दिन सम्म सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस पुरा हेर्नुस==>>